Ogaden News Agency (ONA) – Suuriya oo 38 Qof oo Ku Dhintay Qaraxyo Ismiidaamin.
Suuriya oo 38 Qof oo Ku Dhintay Qaraxyo Ismiidaamin.
Posted by ONA Admin	/ July 26, 2018
Ku Dhawaad 38 qof ayaa ku dhintay weeraro ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Sweida ee koonfurta dalka Suuriya sida laga soo xigtay telefishinka dowlada Suuriya.
Weerarradan ayaa waxa ay ka dhaceen gudaha iyo hareeraha magaalada Sweida, waxaana la aaminsan yahay in Kooxda Daacish ay ka dambeeyaan masuuliyada weeraradan.
Kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu yahay Suuriya ayaa sheegaya in weeraradan ay ku dhaawacmeen 30 qof waxaana xukuumadda Suuriya ay dhankeeda sheegtay in bilihii ugu dambeeyay ay dib ula wareegtay gacan ku haynta magaaladan ku taala koonfurta Suuriya.
Wakaaladda wararka ee Suuriya ee SON ayaa soo warisay in weerar kale oo ismiidaamin ah uu ka dhacay suuqa saxmad badan oo ku yaala magaalada Sweida waxaana ay xaqiijisay in weeraradan ay ku dhinteen tiro aan la cayimin oo kamid ah dadka ka agdhawaa suuqa.
Ciidamada Militariga ee ka amar qaata xukuumada Bishar Al Asad ayaa bariga magaalada Sweida ka wada howlgalo isdaba joog ah oo lagu bartilmaameedsanayo dagaalyahana kooxda daacish ee ka dagaalama dalka ay colaaduhu la dageen ee Suuriya.